HIM | Health in Myanmar » 2013 » July
If the law does not change ...
Not only did SWIM call forachange in the law, but it was reported in the mass media. If the law does not change, it would be helpful to measure the enforcement of it and support those caught up in it. The former needs metrics and the latter legal aid services. “He said authorities […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ART, HIV, PLH, SW, အခွင့်အရေး, ဆေးဝါး
လိင်လုပ်သားများအပေါ် ခွဲခြား နှိမ့်ချ အနိုင်ကျင့်မှုများ ကင်းရှင်း၍ တန်းတူ အခွင့်အရေးများ ရရှိစေရန်၊ HIV ထိခိုက် ကင်းစင်သော လူမှုဘဝ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခု ပေါ်ပေါက် လာစေရန်အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် နိုင်ငံတွင်း ဒေသ ကြီး ၁၀ ခုမှ လိင်လုပ်သား ၃၅ ဦးဖြင့် SWiM ကွန်ရက်ကို စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပြီး ယခုနှစ် ပြုလုပ်သည့် တော်ဝင်ခရေအဖွဲ့ (လိင်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသူများ ကွန်ရက်) ၏ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား ကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၁၃ ခုမှ ဒေသ ကိုယ်စားလှယ် ၈၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ကွန်ရက်ထံမှ သိရသည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, SW, အခွင့်အရေး, အမျိုးသမီး
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ရှိ ဒေသဆိုင်ရာ HIV/ AIDS ကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေးနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်း များကို လုပ်ကိုင်နေသည့် ဒေသဆိုင်ရာ ကွန်ရက်အဖွဲ့ ၁၇ ခုနှင့် ရပ်ရွာလူထု အခြေပြုအဖွဲ့ ၃၆ ဖွဲ့တို့မှ စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ၈၀ ကျော် တက်ရောက်သည့် တော်ဝင်ခရေ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် အချက် ၄ ချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုး တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, PLH, မဇ္ဈိမ, အကူအညီ, အခွင့်အရေး
Is it time to pay more for low dead space syringes in Myanmar? I think so. Jamie *********************************** Abstract: Are major reductions in new HIV infections possible with people who inject drugs? The case for low dead-space syringes in highly affected countries http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22884539 Int J Drug Policy. 2013 Jan;24(1):1-7. Zule WA, Cross HE, Stover J, […]
အမေးအဖြေ (၁၃၈) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A4 comments | Tags: HIV, STD, အမျိုးသမီး, အမျိုးသား, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျနော့်မှာ ပိုးရှိသလားလို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်တုန်းက ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်မှု တစ်ခုလုပ်တော့ ဆေးစစ်ရပါတယ်။ အဲဒီဆေးရုံမှာ ဆေးစစ်တော့ result ကိုတိတိကျကျ နားမလည်လို့ပါ။ HIV Ab ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ non လို့ရေးထားတော့ ပိုးမရှိဘူးလို့ ယူဆရမှာလား ဆရာ။ အဲဒီတုန်းက ပိုးရှိ ခဲ့ရင် ဆေးရုံက ပြောမယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကို သိချင်တာပါ။
Apply now if you want to attend this training
Apply now if you want to attend this training … Jamie ****************************************** HIV Response and Youth Leadership Training in Yangon 25.07.2013 Training Announcement: HIV Response and Youth Leadership Training from 11th -14th September 2013, Yangon, Myanmar UNESCO is working for HIV prevention education among young people, including young people from key populations. We are pleased […]
အမေးအဖြေ (၁၃၆) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar12 comments | Tags: STD, ကျန်းမာရေး အသိ, ဆေးဝါး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အကာအကွယ်မသုံးဘဲ ဆက်ဆံခဲ့တာပါ။ ကျနော်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ partner တွေကလည်း ပါတနာ များပါတယ်။ အခု ကျနော် genital organ ထိပ်ဖျားဧရိယာမှာ အဖုလေးတွေ ထွက်နေပါတယ်။ လက်နဲ့ ဆိတ်ပြီး ဖယ်လိုက်ရင် သွေးထွက် ပါတယ်။ မကြာခင်ပျောက်သွားပါတယ်။ နောက် သိပ်မကြာတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ပေါ်ပေါ် လာပါတယ်။ ကျနော် ထင်တာ HPV များ ဖြစ်မလားလို့ပါ အချိန်ရှိသလောက် ရှာပေမယ့် အဲဒီအကြောင်းကို ဆရာ့စာမျက်နှာမှာ မတွေ့သေးလို့ပါ။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A2 comments | Tags: AIDS, HIV, ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပါတယ်။ သူနဲ့ လိင် မဆက်ဆံရတာ နှစ်လသုံးလလောက်ကြာတော့ မာဆက်က ကောင်မလေးနဲ့ ဆက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဆက်ဆံပြီးမှသိရတာက အဲ့ဒီကောင်မလေးက ရာသီလာနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် တော်တော်ကြောက်သွားတယ်။ သူနဲ့ဆက်ဆံတုံးကတော့ ကွန်ဒုံး သုံးထား ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာ အခုချိန်ထိ မသန့်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီကောင်မလေးမှာ AIDS ရှိနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့ကို ကူးနိုင်ပါလားခင်ဗျာ။